ဘာသာရေး ၊ ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာ ~ Myanmar Express
From : Bo K Nyeinဖန်ဆင်းသူ ထါဝရဘုရားသခင် ကိုယုံသည်ဖြစ်စေ ၊ ဗြဟ္မာကြီးကိုပဲကိုးကွယ်သူဖြစ်စေ ၊ ဗုဒ္ဓကိုပဲ ကိုးကွယ်သူပဲဖြစ်စေ ၊ ရုပ်ထု ကိုးကွယ်သူပဲဖြစ်စေ ၊ ရှေး အီဂျစ်ခေတ် က Sun God လို့ခေါ်တဲ့ နေမင်းကိုပဲ ဘုရားလိုကိုးကွယ်သူဖြစ် စေ ဘာသာရေးဆိုတာ လူတွေ ကိုးကွယ်မှုဖြစ်တဲ့ အတွက် ၊ ကြိုက်သည် ဖြစ်စေ ၊ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေ ၊ ဘာသာရေးဆိုတာဟာ လည်း နောက်ဆုံးတော့ လူတွေရဲ့ တစစ တိုးတက်ပြာင်းလဲမှု Evolution နဲ့ ယှဉ်တွဲလျက် ပြောင်းလဲမှု ရှိတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဖူး။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘယ်ဘာသာမဆို နောက်ဆုံးတော့ လူသားတွေ ရဲ့ နားလည်မှု Human Interpretation အပေါ် မူတည်နေလို့ပဲ။ ဒါစာရေးသူရဲ့ ဥါဏ်မှီသလောက် တွေးဆချက်ပါ။လူသားတွေရဲ့ အသိဥါဏ်တိုးတက်မှု ကြီးထွားလာတာနဲ့ အမျှ ဘာသာရေး နားလည်မှု ၊ အတိအကျ ပြောရသော် Interpretation ပြောင်းသွားသည့် အတွက် ၊ နားလည်မှု လည်း လိုက်ပြောင်းကြရပါတယ်။ဥပမာ ရှေး ခေတ်က မိုလေ၀သ ကောင်းဖို့ရာအတွက် ၊ ဘုရားတွေကို ရာဇ် ပူဇော်ရတယ်။ တခါတရံ Human Sacrifice ပင်ပြုခဲ့ကြရတယ်။ Maya Civilization မှာ လူအချင်းချင်း ရာဇ်ပူဇော်မှု ဟာ အထင်ကရပဲ။ ခလေးသူငယ်လေးတွေကို အရှင်လပ်လပ် မြေမြှုပ် ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။ တူးဖေါ်လို့ရတဲ့ အလောင်းတွေက ငြင်းမရတဲ့ သာဓက တွေပဲ။ သူ့ခေတ် ၊ သူ့အသိဥါဏ် နဲ့တော့ ဒီရာဇ် ပူဇော်မှုဟာ Absolute Truth ၊ အကြွင်းမဲ့ အမှန်တရား ၊ ထိုခေတ် ထိုအချိန်က ကိုးကွယ်မှုရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုး။အခုခေတ် ဂြိုလ်တု ခေတ်မှာ မိုးလေ၀သ ဖြစ်စဉ်ကို ကောင်းကင်ပေါ်က ခြုံကြည့် နိုင်တဲ့ တိုးတက်မှု အသိဥါဏ်နဲ့ ချိန်ထိုးကြည့်ရင် (ရီစရာ) ဖြစ်မနေဖူးလား။ အဓိပ္ပါယ် မဲ့မနေဖူးလား။ ဒါ ကို Evolution လို့မငြင်းနိုင်ဖူးလား။ခရိယာန်ဘာသာ စိုးမိုးထားတဲ့ အချိန် ၊ Dark Ages လို့ခေါ်စမတ် ပြုတဲ့အချိန် က Christianity နဲ့ ယနေ့ ၂၁ ရာစု Christianity တို့ရဲ့ Practices တွေတူညီ ကြရဲ့လား။ Dark Ages အချိန်ကာလ က ခရိယာန်ဘုန်းကြီးတွေဟာ ငါတို့မှ အမှန်ဆိုပြီး ဓါးမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ သိပ္ပံပညာကိုတောင် အဓမ္မနည်းတဲ့ ပြောင်းခဲ့သေးတာပဲ။ Earth ဟာ Center of Universe လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘာသာရေးအယူအဆ နဲ့ ဆန့်ကျင်မှုကို တွေ့ ရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင် Galileo ကိုတောင် တရားဆွဲပြီး နှိပ်ကွပ် နိုင်ခဲ့သေးတာပဲ။ Bible က Psalm 93:1, 96:10, and 1 Chronicles 16:30 အရ "the world is firmly established, it cannot be moved." ကိုရည်ညွှန်းပြီး ကမ္ဘာကြီး ဟာ (မရွေ့) နိုင်ဖူးဆိုပြီး ကက်သလစ် အာဏါပိုင်တွေက Interpret လုပ်ပြီး ဇွပ်သတ်မှတ်ခဲ့တာပဲ မဟုတ်ပါလား။အခု ၂၁ ရာစု ခေတ်မှာ Big Bang ဟာ သီအိုရီ မဟုတ်တော့ဖူး။ Big Bang ရဲ့ အစနီးပါးကို တောင်ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ telescope တွေပေါ်ပြီး သိပ္ပံပညာ တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာ ကက်သလစ် Church နဲ့ Pope တို့ရဲ့ အရှိန်ဟာ ကျဆင်းလျက်ရှိတယ်။ ၂၁ ရာစုနှစ် မှာ Galileo လိုနံမည် ရှိတဲ့ Stephen Hawking က နောက်ဆုံး Universe အကြောင်းရှင်းပြရာမှာ God အတွက်နေရာ မလိုတော့ဖူးလို့ ဆိုခဲ့လေပြီ။ ကက်သလစ် Church က Stephen Hawking ကိုဖမ်းပြီး ဗိုလ်ကျ နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိတော့ဖူး မဟုတ်လား။ ဒါ (အချိန်) အရ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ပကထိ အခြေအနေပဲ၊ တနည်းအားဖြင့် Time အရပြောင်းလဲလာတဲ့ Evolution ပဲ မဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့် ဘာသာရေး အကြောင်းပြောရင် (Time ) နဲ့ (Evolution) ကိုချန်လို့ မရ လို့ ရိုးသားစွာထင်မြင်မိတယ်။စာရေးသူ ဟာ Relative Truth ကိုပဲ လက်ခံ ပါတယ်။ Absolute Truth ကို လက်မခံပါ။ (မှတ်ချက်။ စာရေးသူရဲ့ Notes ၊ ရောမသား (၁) နဲ့ (၂) ကိုကြည့်ပါ။)ခရိယာန်ဘာသာကို ကြည့်ရင် ရောမခေတ် အစ မှာ ခရိယန် ဆိုရင် အသတ်ခံရတာပဲ။ ရေရှု (Jesus) ကိုတောင် ရောမသားတွေက သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသေးတာပဲ။ အချိန် အခါအရ ရောမဘုရင် ခရိယန် ဘာသာကို လက်ခံလိုက်တော့ ခရိယန်ဘာသာဟာ ကြီးထွားလာရတယ်။ ဒါလည်း (အချိန်) နဲ့ အညီ ပြောင်းလဲမှုပဲ။ဘာသာရေးမှာ Exploitation ကိုရှောင်လို့မရဘာသာရေးဆိုတာ လိုအပ်သလို ကြောက်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဘာသာရေး အငြင်းပွားမှုဖြစ်ရင် (Self-Righteousness) ကကပ်ပါလာစမြဲပဲ။ ဒါကြောင့် ဒုတ်ဆွဲ - ဓါးဆွဲတွေ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ဘာသာရေးကြောင့် Crusade စစ်ပွဲကြီးတွေတောင် ဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ထို့နည်းတူစွာ ၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး လုပ်စားသူတွေ ကလည်းမနည်းစကားပြောကောင်းရင် ၊ အဟောကောင်းရင် ၊ လူတွေက ချဉ်းကပ် တာဆိုတော့ အမေရိကားမှာ ဘာသာရေး ဂိုဏ်းတွေ ၊ Church တွေထောင်ပြီး ၊ ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေ အများကြီး။ အထူးသဖြင့် TV Preacher တွေ ဟာ ဘာသာရေးအကြောင်ပြပြီး စီးပွားရေး အင်ပါရာကြီးတွေတောင် ထောင်နိုင်ကြပါတယ်။ Billy Grahm တို့လို လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ Preacher တွေရှိသလို Jim and Tammy Faye Baker တို့လို လူလိမ်တွေက လည်းအများသား။အရင်းစစ်လိုက်ရင် ဘာသာရေး ရဲ့ အားနဲချက်က ဘာသာရေးဆိုတာနဲ့ ယုံလွယ် ကြတယ်။ ကျမ်းစာအုပ်က ဒီလို ပြောတယ်ဆိုရင် ယုံလိုက်ကြတာပဲ။ အများက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လေ့လာထားကြတာမှ မဟုတ်တာ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာသာရေး ဆရာတွေက ငါတို့ ဘာသာရေးကျမ်းစာ တွေက ဒီလို ပြောတယ်ဟေ့ ဆိုပြီး ဟိန်းဟောက်လိုက်ရင် မိမိဘာသာကို စော်ကားရာရောက်မှာ စိုးတော့ လူအများက ယုံလိုက်ကြတာပဲ။ဒါကြောင့် ဘာသာရေး မှာ Exploitation က လူလယ် ၊ လူလိမ် တွေအဖို့ သိပ် လွယ်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ဘာသာတိုင်းမှာ နောက်ဆုံးတော့ Human Interpretation ပဲ။နောက်ဆုံးတော့ တဖက်က ပြန်တွေးကြည့်ရင် ဘာသာတိုင်းမှာ Human Interpretation နဲ့ အဆုံးသတ်တာပဲ။ဘယ်သူကမှ ဘုရာသခင် နဲ့တွေ့ဖူးကြတာမှ မဟုတ်။ အမှားအမှန် ကိုယ်လည်း ဘုရာသခင် ကိုမေး၍ ရသည်မဟုတ်။ဘုရားသခင်က တမန်တော်တွေကိုပြော ၊ တမန်တော်တွေက တခါ ကျမ်းစာတွေဖြစ်ဒီကျမ်းစာတွေ ကို Interpret လုပ်ရာမှာ ကွဲလွယ်မှု တွေဖြစ်ကြပြီး ဂိုဏ်းတွေကွဲ ၊ ဒါဘာသာတူု အချင်းချင်းမှာ ပဲ သပွပ်အူရှုပ်ထွေးနေကြတာ။Final Analysis မှာ Root Cause က Interpretation ပဲ။ဒါကို တထစ် ထပ်စိပ် လိုက်ရင် ..ကိုယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ … (Time) အချိန်ကာလမှာ အများလက်ခံတဲ့ ဘာသာရေး ပုဂ္ဂိုလ် တွေရဲ့ Interpretation ပဲ။ဒါ Creation ကိုလက်ခံတဲ့ ဘာသာတွေပဲလား။ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာလည်း ရှင်ကြီး ဂေါတမ ဆိုတာ အသက်ထင်ရှားရှိတော့တာမှ မဟုတ်တာ။ဒီတော့ နောက်ဆုံး Human Interpretation မှာပဲ လမ်းဆုံးကြရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ Absolute Truth မဟုတ်ဖူး။ Universal Truth။ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ ဘုရားသာသနာ ၊ ပြီးရင် သိကြားသာသနာ ၊ ပြီးရင် သာသနာပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ပါတယ် မဟုတ်လားနောက်ဘုရားတစ်ဆူ ထပ်ပွင့်မှ တခါ သာသနာ ပြန်ထွန်းကား ပြန်မယ်။ဒါ Time Factor ရဲ့ သက်ရောက်မှုပဲ။ဒါကြောင့် ဘုရားပွင့်တဲ့ အချိန်မှာ (လူ) ဖြစ်ရတာ အလွန်ကံကောင်း သလို ၊ သာသနာထွန်းကားတဲ့ အချိန်မှာ လူဖြစ်ရတာလည်း ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါတယ်။သာသနာ ထွန်းကားတဲ့ အတွက် တရားရနိုင်ပြီး အကျွပ်တရားရနိုင်သည်ကိုးUniversal Truthဒါကြောင့် စာရေးသူရဲ့ နားလည်မှု Interpretation က ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ Universal Truth။ Absolute Truth က ဘုရးသခင်က ပြောလို့ (အမှန်) တရားဖြစ်တာ။ သွားငြင်း၍ မရUniversal Truth က Process။ (ရှိနေတာ)။ သာမန်လူတွေ သိပြီး လူတွေကျွပ်အောင် ဟောနိုင်ဖို့ မလွယ်။ သဗ္ဗင်ညုတဥါဏ်ကို ရရှိမှ ဘုရားဖြစ်မှ ဒီတရားကို သိရှိခွင့်ရတာ။ ဘုရားဖြစ်ပြီးမှ လူသားတွေကို ချွပ်ခွင့်ရတာ။လူသားတွေကလည်း အုံဖွဆိုပြီး အကျွပ်တရား ရသည်မဟုတ်။ ဘုရားက ညွှန်ရုံညွှန်နိုင်တာ။ ဘုရားက ကျွပ်စေသတည်းဆိုပြီး လူသားတွေကို မချွပ်နိုင်။ Creator လို တန်ခိုးရှင် မဟုတ်။ ကျွပ်နိုင် မကျွပ်နိုင်ကိုသိနိုင် ပေမဲ့ လူတွေက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကျင့်ကြံမှ ၊ သို့မဟုတ် ပါရမီ ပါလာမှ ၊ မဂ် (၄) ပါး ဗိုလ် (၄) ပါးစိုက် မှ Convincing Truth ကိုမြင်ပြီး လက္ခံမှ နိဗ္ဗန်ကိုရောက်ရမှာ။ ဘုရားက အကျွပ်တရားရအောင် လမ်းပြ တရားဟောနိုင်တယ်။ နိဗ္ဗန် ဆိုတာကလည်း For Eternity ပျော်ရွှင်ရမဲ့ နေရာမဟုတ်။ (၃၁) ဘုံမှာ ကျင်လည် ရမဲ့ ၀ဋ်က ကျွပ်သွားတဲ့ Continuity ရပ်သွားတဲ့ State တခုကိုရပြီး Peace ရသွားသည်ပဲ။Process ပဲစာရေးသူ ဥါဏ်မှီသမျှ တွေးကြည့်တာက Buddhism ဟာ သံသရာလည်ရတဲ့ Process ဆိုတဲ့ Universal Truth ကို Discover ဖြစ်တာပဲ။ ဘုရားတိုင်း ဒီ Process ကိုမြင်ပြီး ဒီ Process ကလွပ်ရာကျွပ် ကြောင်းကို (တရား) အဖြစ်ဟောတာပဲ။ ကောဏဂုံဘုရား ၊ ကဿဖ ဘာရား တို့နဲ့ ဂေါတမရဲ့ (တရား) ကွာတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီ တရားပဲ။ ပွင့်တဲ့ Time အချိန် ပဲကွာတာ။ ပွင့်ပြီးတဲ့ ဘုရားတိုင်း ဒီတရားကိုဟောကြတာပဲ။ ဒါကြောင့် Buddhism မှာ (ဘုရား) ထက် (တရား) က ပို အရေးကြီးတယ်လို့ တွေးမိတယ်။ (ဘုရား) က (တရား) ပြတဲ့ အတွက် ၊ ကျေးဇူးတင်ပြီး ပူဇော်ကိုးကွယ်တာပဲ။ ဘုရားကြီး ရှိခိုးနေရင် ကုသိုလ်ပဲ ရမယ် သံသရာက လွပ်မှာ မဟုတ်ဖူး။ (တရား) ရပြီး Convinced ဖြစ်သွားရင် အသက်သော အသေခံမယ် ၊ တရားမပျက် တော့ဖူး။ (တရား) ရဖို့ အဓိက ပဲ။Creator ကို လက်ခံတဲ့ ဘာသာတွေမှာ ဘုရား က အဓိကပဲ။ ဘုရား က အားလုံးကို ဖန်ဆင်းပြီး ၊ နောက်ဆုံး Judgment Day ရောက်ရင်လည်း ဒီဘုရားက ပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာပဲ။ဘုရားကြိုက် အောင်နေ ၊ ဘုရားကြိုက်တာလုပ် ၊ ဘုရားကြိုက်ရင် Heaven ရောက်မယ်၊ ဘုရားမကြိုက်ရင် Hell ရောက်မယ်။ Both Heaven & Hell ဟာ Eternity ။ ထို့ကြောင့် (မှား) ရင် Forever ဆိုတဲ့ FEAR ပါလာတယ်။ဒါကြောင့် (အမှား) နဲ့ (အမှန်) က သိပ်အရေးကြီးလာပြီး ၊ အမှား အမှန် ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာက (ဘုရား) ဟောအတိုင်းကျင့်။ နောက်ဆုံး တော့ “(ဘုရား) ဟောအတိုင်းကျင့်” ဆိုတာ တွေကလည်း ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့ Interpretation လာဖြစ်တာပဲ။ ဒီအတိုင်း ကျင့်ကြံ နေထိုင်ကြမှ heaven ကိုရောက်မှာကိုး။ဒါကြောင့် Creation ကိုလက်ခံတဲ့ ဘာသာတွေမှာ (ဘုရား) သည် အဓိက။ ထိုမှတဆင့် ၊ ဘုရားရဲ့ ကိုယ်စလှယ်တွေ လို့ပြောတဲ့ ဘာသာရေး ဆရာတွေ က By Proxy အရေးပါ အာဏါရှိလာကြတယ်။ သူတို့ပဲ စည်းမျဉ်းတွေကို Interpret လုပ်ပြီးထုတ် ၊ ကြီးကြပ် ၊ လာကြတာကိုး။ ဒါထက် တဆင့်တက်တော့ Organized Religion ဖြစ်လာရင် Organization ရဲ့ Self Interest က ပို အရေးပါလာပြန်တယ်။Buddhism က Individualism ပဲ။ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်ရတာ။ဘုရားသခင် ရဲ့ အလိုကျ မဟုတ်။ဘာသာတိုင်းမှာ အတက်အကျရှိတယ်လူတွေစီမှာ Evolution အရ အတက်အကျ ရှိသလို ဘာသာတွေမှာလည်း အတက်အကျ ရှိတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဥပမာ Jesus မပေါ်ခင်က ဂျေရူစလန် မှာ ဂျူး တွေကြီးစိုးတာပဲ။ Jesus ရေရှု ရောက်လာတော့ ဒီ ဂျူးဘာသာရေး ဆရာတွေကပဲ Roman Governor ကို တိုင်လို့ Jesus ကို Crucified လုပ်ပြီးသတ်ပစ် တာပဲမဟုတ်လား။ ဒီခေတ်မှာ ထောက်လျေက် ခရိယန် တွေကို ရိုမန်တွေက သတ်ဖြတ် နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာပဲ။ ရိုမန်ဧကရာဇ် ကိုယ်တိုင် ခရိယန် ဖြစ်သွားမှ ခရိယန်တွေ ခေါင်းထောင်လာနိုင်တာပဲ။ နောက် Roman တွေခေတ်မှာ religious Sects တွေအများကြီးရှိရာမှာ Attila ခေတ်ရောက်တော့ မှ Rome ကိုချီတက်လာတဲ့ Attila ကို Rome ကိုမချီတက်ဖို့ Pope က အောင်မြင် အောင် လဘ် ထိုးနိုင်ပြီး Attila ပြန်ဆုတ်သွား။ ပြီး Attila သေသွားမှ ဒါ Divine Intervention ဆိုပြီး Catholicism ဟာတချိန်ထိုး ကြီးထွားသွားတာပဲ။ ဒါဟာလည်း အမှန်တော့ Human Manipulation ပဲမဟုတ်ဖူးလား။ ဟော Dark Ages ရောက်တော့ ခရိယန်ဘာသာ ဟာ Dominating Status ကိုရောက်သွားပြီ။နောက်ပိုင်း ကိုလိုနီ ခေတ်ရောက်တဲ့ အခါ ဥရောပ ကိုလိုနီ သမားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခရိယန် ဘာသာ ကို ပါဖြန့်ချီ လာတာပဲမဟုတ်လား။ ဒီလိုနည်း နဲ့ Maya တွေနဲ့ တောင်အမေရိက တိုက်တခုလုံး ဘရင်ဂျီ Cathoic ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကုန်ရသလို တရုတ်ပြည် က Boxer Rebellion ဟာလည်း တရုတ်မျိုးချစ်တွေ Imperialism နဲ့ Christianity ကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့ တော်လှန်ရေးပဲ မဟုတ်ပါလား။ ထိုခေတ် ထိုအချိန် က သာ မျိုးချစ်သာဖြစ် ခဲ့ရင် ခရိယန် သာသနာပြု တွေကို မုန်းလိုက်မဲ့ ဖြစ်ချင်း။လစ်ဖရယ် ဒီမိုကရေစီ ဥရောပ မှာကြီးထွားလာတဲ့ အခါမှ .. Colonist တွေနဲ့ အတူ Organized Religion တွေဟာလည်း အရင် ကလို မကြီးထွား နိုင်တော့ဖူး။ လွပ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်ရလာကြတဲ့ အခါမှာလူတွေဟာ Organized Religion တွေကို နှာခေါင်းရှုံ့လာကြတယ်။ ဒါတောင် အကြမ်းပြင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကက်သလစ်ဘာသာဝင် က သန်း ၁၀၀၀ (1 Billion) ကျော်ကျန်ပြီး ကျန်တဲ့ ဂိုဏ်းကွဲတွေက နောက်ထပ် သန်း ၁၀၀၀ လောက် ကျန်သေးတယ်။မွတ်စလင်ဘာသာ ဟာလည်း တချိန်က Caliphate လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရေး အုပ်ချုပ်မှု အထိ ကြီးကျယ်ခဲ့ကြပြီးမှ ဥရောပက နယ်ချဲ့ကိုလိုနစ် တွေအောက်မှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ လောလောဆယ် ဘာသာရေး အယူသန်သူတွေဟာ ဒီ ဘာသာရေးအုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ် Caliphate တွေကို ပြန်လည် ထူထောင်ချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက် ရှိကြတယ်။ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး အစ္စလမ်ဘာသာကိုလိုနီ ခေတ်မှာ အနောက်ဥရောပ က အဖြူတွေက တကမ္ဘာလုံးကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းပြီး သွေးစုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အာရပ်ကမ္ဘာတခုလုံး လိုလို ကျွန်ဘ၀ရောက်သွားတော့ ဘာသာရေး ဟာ လည်း နိုင်ငံ့ အရေးလိုပဲ ခေါင်းမထောင်နိုင်ခဲ့ဖူး။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကြီးအပြီးမှာ နိုင်ငံတွေဟာ ပြန်လည်ထူထောင်ကြရမှ တကယ် ရေနံ ခေတ်ကိုရောက်ခဲ့ကြရတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီးခါနီးမှာ အမေရိကန်သမ္မတ Roosevelt နဲ့ ဆော်ဒီဘုရင် တို့စစ်သင်္ဘော အပေါ်မှာတွေ့ဆုံကြပြီး ဆော်ဒီတွေက ရေနံရောင်း ၊ အမေရိကန်က လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီး သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ ဒီသဘောတူညီမှု ဟာ ယနေ့အထိ ရှင်သန်လျက်ပဲ။အာရပ်ကမ္ဘာမှာ သံရာဇာတ ဘာမှမဲမဲရရ ရှိတာမဟုတ်။ ရေနံကလွဲရင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တကမ္ဘာလုံး က ရေနံကိုအားကိုး လာရတော့ ရေနံ ဟာ ရွှေမဲ ဖြစ်လာဖြစ်လာပြီး အာရပ်တွေဟာ ဒီ Petro Dollar တွေ နဲ့ နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာလာကြတယ်။Wahhabism (Arabic: وهابية‎)အစ္စလမ်ဘာသာ ထူထောင်ရာ ဆော်ဒီအရေးဘီရားနိုင်ငံ Najd ဆိုတဲ့မြို့မှာ ဘာသာရေးပညာရှင် Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) ပေါ် ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီဘာသာရေး ပညာရှင်ဟာ အလွန်တင်းကြပ်တဲ့ Interpretation ကို ခံယူတဲ့ သဘောထားကို လက်ခံတဲ့ တရားဟောဆရာက ထိုအချိန်က အုပ်ချုပ်သူဖြစ်တဲ့ Muhammad ibn Saud နဲ့ ၁၇၄၀ မှာပေါင်းမိပြီး တစ်ယောက်က ဓါးမိုး အုပ်ချုပ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်က အုပ်ချုပ်ရေးကို ဘာသာရေးနဲ့ ထိန်းကွပ်ပေးတဲ့ သဘောတူညီမှုကို ရရှိကြပြီး နောက်ဆုံး Wahhabism ဟာ ဆော်ဒီမှာ ကိုးကွယ်စည်းကပ်ရာ တခုတည်းသော ဘာသာရေကိုးကွယ်မှုဖြစ်လာရတယ်။ Wahhabism ဟာ doctrine of Tawhid လို့ခေါ်တဲ့ ဘုရားတစ်ဦးတည်းသာလျှင်ရှိတယ် "uniqueness of God” ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးအတွေးအခေါ်ပေါ်မှာ ရပ်တည်ပြီး ကျန်သော ကိုးကွယ်မှု တွေမရှိစေရဆိုတဲ့ ပညတ်ကို အားလုံးလက်ခံ ကျင့်သုံးစေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၂ နှစ်ထဲမှာပဲ ဆေးလိုက်ကုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို စုန်းရူးနတ်ရူး ဆိုပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တယ်။ လင်ငယ် နေတဲ့ မိန်းမ ၊ ယောက်ျားတွေကို တွင်းထဲမြှုပ် ၊ ခေါင်းပဲဖေါ်ထားပြီး ၊ ရွာသားတွေက ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ပေါက်သတ်ရမယ်ဆိုတာလည်း ဒီဘာသာရေးဆရာ ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပဲ။Wahhabism ကမ္ဘာပြန့်ပြီ။Wahhabism ဟာ ဆော်ဒီမှာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာအဖြစ်သာ ရပ်တည်ခဲ့ရာမှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး ဆော်ဒီဘုရင်တွေ Petro Dollars တွေနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာ Wahhabism ကို တဖြေးဖြေးကမ္ဘာကို ဖြန့်လာခဲ့ကြတယ်။ အမေရိကား တပြည်လုံး နဲ့ ဥရောပတခွင် ဆောက်ထားတဲ့ ပလီ တွေဟာ ဆော်ဒီငွေတွေနဲ့ ဆောက်တာပဲ။ နောက် ဆော်ဒီတွေက ဘာသာရေးကျောင်းတွေ ဆောက် ၊ ဘာသာရေးကူညီမှု အသင်းတွေကို အားပေးရုံ မက အမေရိကန်-အစ္စလမ်ဘာသာရေး အသင်းတွေကို ဖွဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း ဘာသာရေးကွန်ယက် ကိုတည်ဆောက်ပြီး ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှု ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ပညာသားပါပါ ပါးပါးလေး လုပ်ဆောင်လာတာ ကြာခဲ့ပြီပဲ။လစ်ဖရယ် စိတ်ကူးယဉ်သမားတွေက Human Rights ကိုအရေးပေးပြီး တကမ္ဘာလုံး လိုက်ကူ နေချိန်မှာ ဆော်ဒီဘုရင်မျိုးတွေက ဘာသာရေးမှာပဲ ငွေသုံးပြီး အစ္စလမ်ဘာသာဖြန့်ပွားရေးမှာပဲ ငွေသုံးကြတယ်။ အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေမှာ သဘာဝဘေးကပ်ဆိုက်ရင်တောင် ဆော်ဒီတွေက ငွေပုံး သုံးလို့လား။ဆော်ဒီဘုရင်မျိုးတွေက အုပ်ချုပ်လာတာလည်း ကြာလှပြီ ။ ပိုက်ဆံလည်းရှိတော့ အာဏါ ၊ ငွေ နဲ့ Manipulation အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနော်ကြေနေကြပြီ။ ဒါကြောင့် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ကျင့်သုံးကြတဲ့ ဘာသာရေး လွပ်လပ်ခွင့် ကို အသာလေး အသားယူပြီး စပါးကြီးမြွေကြီးလို တဖြေးဖြေး စိမ်ပြေနပြေ မြိုနေလိုက်တာ အမြိုခံရတဲ့ အနောက်နိုင်ငံက လစ်ဖရယ် ဥါဏ်ကြီးရှင်တွေ သတိတောင် မထားမိကြဖူး။အိုစာမာ လာပြီဗျို့ဆော်ဒီဘုရင်တွေ လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ ဘာသာရေးတိုးချဲ့နေချိန်မှာ ဟီးရိုးဖြစ်ချင်တဲ့ အိုစာမာ ဘင်လာဒင် က ၀ုန်းဆို ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ ဖုံးဖေါက်ပြီး ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးစင် ကို အကြမ်းနည်းနဲ့ တက်လာလေရဲ့။ အိုစာမာ အဖေဟာ ရီမင်ဇာတိ ဆော်ဒီမှာ ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ချမ်းသာလာသူမို့ ဘင်ကြီးရဲ့ ယုံကြည်မှုဟာလည်း Wahhabism ပေပဲပေါ့။ ဆော်ဒီ ပိုက်ဆံနဲ့ Wahhabism ဟာ ကမ္ဘာပြန့်နေတာ လူတွေမသိလိုက်ကြဖူး။ပါကစ္စတန် နိုင်ငံရဲ့ ထောက်လှန်းရေးအဖွဲ (ISI – Inter-Services Intelligence) ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းပြီး အာဖဂန်မှာ အာဏါရလာတဲ့ တာလီဖန် တွေဟာလည်း Wahhabism ကိုလက်ခံ ကျင့်သုံး သူတွေ ဖြစ်နေကြပြီ။ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ Wahhabism ကိုဆော်ဒီမှာ ကျင်သုံးနေတာ ရာစုနှစ်တွေ မက ရှိခဲ့ပြီ။ ကြိပ်ပြီးသောင်းကျန်နေတာ ကမ္ဘာကလည်း မသိ ၊ ဂရုလည်းမပြုမိခဲ့ကြပေ။ အာဖဂန် မှာ ရက်ရက်စက်စက် သောင်းကျန်းလာမှ ကမ္ဘာက ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်ကြရတယ်။အာဖဂန်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တရာကျော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံ။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေကို အဓမ္မဘာသာရေး ဖြန့်ချီမှုကို လက်ကိုင် ထားတဲ့ အစ္စလမ်ဘုန်းကြီး တွေက လိုက်သတ်ပြီး အာဖဂန်နိုင်ငံဟာ အစ္စလမ် နိုင်ငံဖြစ်လာရတယ်။ ဟော မျက်စိတဖက်နဲ့ ဆွေစောင်း မူလာအိုမား လို တဖက်စွန်း တာလီဖန် တွေခေတ်ရောက်တော့ Wahhabism ရဲ့ ဘုရားတဦး သာလျှင် ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ အယူနဲ့ ကျောက်ကဖါး မှာ ထွင်းထုထားတဲ့ ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်တွေကို အမြှောက်နဲ့ ပစ် ၊ မိုင်းခွဲပြီး ဖျက်စီးခဲ့ကြတယ်။ အစ္စလမ်းဘုန်းကြီးတွေလက် ကထွက်ပြေးရင်း မြေမြှုပ်ခဲ့ရတဲ့ လဲလျှောင်း ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ကြီးကို အာဖဂန်မှာ ဂျာမန်ပညာရှင်တွေ လိုက်ရှာနေကြတာ ခုထိ မတွေ့သေးဖူး။ မတွေ့သေးတာပဲကောင်းပါတယ် ၊ မိစ္စာကောင် တာလီဖန် တွေနဲ့ ဆိုမဖြစ်ပါဖူး။ငရန်မန်ကန်း မူလာ အိုမာ ကအာဖဂန်မှသောင်းကျန်း ၊ ၎င်းရဲ့ ဖွားဖက်တော် ဘင်ကြီးက ကမ္ဘာမှာ အကြမ်းဖက် ဖျက်စီးသောင်းကျန်း ပြီး ဓါးသိုင်းနဲ့ ထွက်လာကြ မှ ကမ္ဘာကြီး က Wahhabism ကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ အစ္စလမ်သောင်းကြမ်းသူ တွေကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ၊ တွေ့ဖူးကြရတော့တယ်။ အမေရိကန် တွေက ဘုန်းပေါ်လအော ဖြုန်းကြ ၊ ဆော်ဒီတွေက petro dollars တွေရ ၊ ဒီငွေနဲ့ ဆော်ဒီတွေက Wahhabism ကိုကမ္ဘာကို ဖြန့် ၊ ဒီ petro dollars တွေကရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ ချမ်းသာလာတဲ့ ဘင်ကြီး က အစ္စလမ်သောင်းကြမ်းမှု ကိုဦးဆောင် ၊ နောက်ဆုံး 9/11 မှာ နယူးရောက်မှာ စိန်အောင်မင်း အတီးလေးနဲ့ World Trade Center ကို ဆော်ပလော်တီးလိုက်ကြမှာ အမေရိကန်တွေက အိုမိုင်ဂေါ့ (OMG) ဆိုပြီး အိပ်ရာက လန့်နိုးလာကြရတော့တယ်။ဆော်ဒီတွေက အနုနည်းနဲ့ Wahhabism ကိုဖြန့်တယ်။ ဘင်ကြီးက ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ Wahhabism ကိုဖြန့်လိုက်ကြတာ။ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ကြပြီဘင်ကြီးတို့ ကံဆိုးတာက ဘင်ကြီးတို့ ဟို ဖုံးဖေါက် ၊ ဒီဖုံး လုပ်တုန်းက လစ်ဖရယ် သမ္မတ က Bill Clinton။ လစ်ဖရယ်တွေက ဘင်ကြီးတို့ကို ရာဇ၀တ်မှု လောက်သဘောထားတာ။ သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြဖူး။ဘင်ကြီးတို့ရဲ့ မဟာအောင်မြင်မှု ဖြစ်တဲ့ 9/11 ရောက်တော့ George Bush က သမ္မတဖြစ်ကာစ။ ဂျော့ဘုရ်က ဘာသာရေး အစွဲအလန်းကြီးတဲ့ နေရာမှာ ဘင်တို့နဲ့ သူမသာ ၊ ကိုယ်မသာ။ ဂျော့ဘုရ် က အသက် (၄၀) အထိ ပုလင်းဖက် နေတဲ့သူ။ မိန်းမ က ရှင် ကျမကို စွန့်မလား ၊ Jack Daniel ကိုစွန့်မလား ဆိုမှ ရုတ်တရက် လူဖြစ်လာရတဲ့ အပြင် ဘာသာရေး အမြင်ကြည်လာပြီး Born Again Christian ဖြစ်လာရ တဲ့သူ။ ဂျော့ဘုရ် က Intellect မဟုတ်ဖူး။ သိပ်နက်နက်တွေးတတ်သူမဟုတ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်ကို ထိရင် ဓါးကြည့် ၊ အမေရိကန်တစ်ယောက်သေရင် မီးပွင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး။ဒါကြောင့် ဘင်တို့ကို ရာဇ၀တ်မှု အနေနဲ့ မကြည့်တော့ဖူး။ စစ်ပွဲ အနေနဲ့ ပဲမြင်တယ်။ ပြောမကောင်းလို့သာ ဘင်တို့ကို အမှန်အတိုင်း ဘာသာရေးစစ်ပွဲလို့ပဲ အမှန်အတိုင်း မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် “Dead or Alive” တို့ “Crusade” ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေ သုံးလာတဲ့အခါ မှာ ၀ိုင်းအော်ကြတာကြောင့် မိန်မဆူတာနဲ့ ငြိမ်သွားရတာ။ဘင်ကြီးတို့ Clinton တို့ကိုကြည့်ပြီး အမေရိကန်တွေဟာ ငပေါတွေ။ Cruise Missiles (၁၀) လုံးလောက် ပစ်ပြီး ပြီးသွားမှာပါလို့ ထင်နေကြတာ။ ဘင်ကြီးတို့ ကံဆိုးရှာတာက ဘုရ်နားမှာ ၀ိုင်းရံထားတာက ၂၁ရာစု နှစ်ဟာ အမေရိကန် ရာစုနှစ်ပါဆိုပြီး ကြွေးကျော်ထားတဲ့ ကွန်ဆာဖေးတစ် မိုက်ခဲတွေ။ ဒုသမ္မတ ချိန်နီ ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Donald Rumsfeld တို့လိုလူတွေ။ ဂျော့ဘုရ်က ဘုံးမိုးရွာပြီး စီအိုင်အေ ရဲ့ မလီရှာ တွေနဲ့ ၀င်နွှာလာတော့ ဘင်ကြီး နဲ့ ငရန်မန်ကန်း မိုလာအိုမာ တို့ ဖင်သနီလန် အောင်ထွက်ပြေးကြရတာ။ ကျောက်ခေတ်ပြန်ရောက်သွားအောင်ဖုံးကြဲပစ်မယ်ကြီမ်းခြောက်ခံရတော့ ပါကစ္စတန်က မွပ်စလင်ကုလားတွေလည်း အမေရိကန်ကျေနပ်အောင် 9/11 ကိုဖေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အငယ်ကောင်တွေကို ချကြွေးပြီး ဘင်နဲ့ အိုမာ တို့ကိုတော့ ISI ကပဲကျိပ် ဖွက်ပေးထားခဲ့တယ်။ ပြီးတဖက်လှည့် နဲ့ အမေရိကန် ကို ငွေလက်ဖြန့်တောင်းပေါ့။အမေရိကန်သမ္မတ ရဲ့ အာဏါအမေရိကန်သမ္မတ ဆိုတာက “Institution” ။ ဒါကြောင့် သူ့အောက်မှာ “ စနစ် - system “ ။ ဒီအောက်မှာမှ “Rules & Regulation” ဆိုတာတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် (စနစ်) ကိုသိရင် ကိုယ်လိုချင်တာကို ဖေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းတွေရှိတယ်။ အမေရိကန် Constitution အရ လု့အခွင့်အရေးတွေကို အာမခံချက်ပေးထားတယ် ဆိုတာက အမေရိကန် လူမျိူးတွေ အတွက်ပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီအစ္စလမ်မစ်အကြမ်းဖက် သမားတွေကို အမေရိကန် မြေကို အနင်းမခံဖူး။ ဂွာတာနာမိုး မှာပဲ ထားပြီး ကိုင်တော့တာပဲ။အမေရိကန် စနစ်မှာ စစ်ကြေငြာ တာက ကွန်ကရက် က ကြေငြာရတယ်။ ဒီလိုကြေငြာပြီးရင် စစ်ကို နိုင်အောင်တိုက်ဖို့ စစ်ဦးစီးချု့ပ်ဖြစ်တဲ့ သမ္မတရဲ့ တာဝန်ပဲ။ တရားရေးဌါနက အစိုးအတွက် ဥပဒေ အကျိုးဆောင် (သို့) ရှေ့နေပဲ။ စီအိုင်အေက ဒီအစ္စလမ်မစ်အကြမ်းဖက် သမားတွေကို မိလာရင် စစ်ဆေးရာမှာ torture လုပ်ခွင့် မရှိဖူး။ ဒါကြောင့် retention လို့ခေါ်တဲ့ မိတ်ဖက်အစိုးရ စစ်ကြောရေးဌါန တွေကို ခေါ်သွားပြီး အမေရိကန် ကိုယ်စား ခပ်ကြမ်းကြမ်းစစ် ခိုင်းတယ်။ နောက် ရေလောင်းစစ်တဲ့ water Boarding ဟာ torture မဟုတ်ကြောင်းကို တရားရေးဌါန က Constitution အရ ထင်မြင်ချက် ပေးရတယ်။ ဒီတရားရေးဝန်ကြီးဌါန ရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို မှီငြမ်း ပြီး သမ္မတဘုရ် က water boarding လုပ်စေ ဆိုတဲ့ Presidential Directive - သမ္မတအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ အခါ အားလုံးဟာ တရားဝင် သွားတော့တယ်။ဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကိုင်နိုင်လို့ ဘင်ကြီးတို့ လူတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်အဖမ်းခံရတာပေါ့ခေတ်ပေါ် Dronesနောက် ဘုရ်လက်ထက်မှာ ပဲ Drone လို့ခေါ်တဲ့ မောင်းသူမဲ့ လေယဉ်နဲ့ လေပေါ်မှာ ပျံဝဲနေပြီး Value Target လို့ခေါ်တဲ့ အရေးကြီးပစ်မှတ် ကို တွေ့ရင် လေပေါ်က Missile နဲ့ ထုလိုက်တော့ ပြေးမလွပ်တော့ဖူး။အရင်က ဘင်တို့ အမေရိကားကို ၀င်ပြီး အကျမ်းစီး ၊ ဖုံးဖေါက်နိုင်တာ။ အခု Drones တွေက ဘင်ကြီးတို့ နယ်မြေကို လေပေါ်က စိုးမိုးထားပြီး ရွှေ့ပြောင်းတာနဲ့ (၀ုန်း) ဆို အသက်ပျောက် သွားပြီမှတ်။ ကိုယ့်နယ်မြေမှာ ကိုယ့်ကားနဲ့ မရွှေ့ရဲ ၊ ဗြောင်ခရီး မသွားရဲတော့ဘူး။ သိပ္ပံပညာ တိုးတက်လာတာကလည်း အခု Liquid Hydrogen နဲ့ မောင်းတဲ့ Drone ဟာ ၃-၄ ရက် လေပေါ်မှာ မနားတန်း ပျံနိုင်တယ်။ အမြင့်ကြီးပျံနိုင်တဲ့ ဒရုံး ရှိသလို နိမ့်နိမ့်ပျံတဲ့ ဒရုံးတွေ ရှိတယ်။ ဒရုံးသံကြားရင် အစ္စလမ် အကြမ်းဖက်သမားတွေ နေမထိ ၊ ထိုင်မထိ ဖြစ်နေကြပြီ။ ဒါ စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးပဲ။ တကယ်ချတော့ အမြင့်ကြီးပြန်တဲ့ ဒရုံး က ရှိနေမှန်းတောင် မသိရဖူး။ မကြားရဖူး။ ထွက်လာမှ ဒရုံး က ၀ုန်းဆို… သွား ပြန်ပြီ နောက်တစ်ယေက်။အမေရိကန်တွေ တည်ထွင် တည်ဆောက်နေတဲ့ Drones တွေဟာကြောက် ခမန်းလိလိ။ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကို ဖျက်စီးခဲ့ကြတဲ့ မျက်ကန်းမိုလာ နဲ့ အစ္စလမ်မစ်အကြမ်းဖက် သမားတွေ ငရဲမှာ မခံရခင် ကျီးလန့်စာစား ကိုယ်နယ်မြေမှာ ကိုယ်မလုံခြုံကြတော့ဖူး။ မကြာသေးခင်ကပဲ အဲလ်ကိုင်းဒါး နံပတ် (၂)တစ်ယောက်လည်း Drone ကောင်းမှုနဲ့ ငရဲကို ဇောက်ထိုး ဆင်းသွားလေရဲ့။နောက် Drones တွေကောင်းတာက Drone Pilot လေယဉ်မောင်း သမားတွေဟာ အိမ်က သားမယားတွေနဲ့ မခွဲမခွာရပဲ ၊ hamburger ကိုက်ရင်း မိုင် ၇၀၀၀ ကျော်က မိစ္ဆာကောင် ကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ရှင်းထုတ် နိုင်တဲ့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ် ဆုရှင် အိုဘားမား ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးလက်နက် လာဖြစ်ရတယ်။အသေအခြာစဉ်းစားရင် အိုစာမာ ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆော်ဒီဘုရင် အမျိုးအနွယ်တွေဟာ တကယ်လူလည်ကြီး သားသမီးတွေ။ သူတို့အမျိုးအနွယ် တွေ ဟာ အမေရိကန် ကျောင်းကောင်းတွေက အောင်ကြတာ။ အမေရိကန် စနစ်နဲ့ လစ်ဖရယ်ဝါဒ ရဲ့ အားနဲချက် ၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါကြောင့် Petro Dollars တွေကို Wahhabism ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြန့်ပွားရေးကို စိတ်ရှည်ရှည် နဲ့ အကောင်အထည်ဖေါ်နေကြတာ အနှစ် (၂၀) ကျော်လာပြီ။ လူမသိ ၊ သူမသိ သာသာလေး (မြို) နေတာ။ ကမ္ဘာက သိနေတာက အီရန်က အာလာတိုလာ တွေက (လူဆိုး) တွေ။ အီရန်တွေက (ရှီရာ) Shia တွေ။ Sunni နဲ့ Shia တွေက မတဲ့။ အိုစာမာ သာ မပေါ် ခဲ့ရင် ကမ္ဘာကြီး (သိ) လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အစ္စလမ် ရဲ့ ၀ါးမြိုခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီး သိပ်နောက်ကျ သွားလိမ့်မယ်။အိုစာမားကို တိမ်တိမ်လေးကြည့် ရင် အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ အဖို့ ဘာသာအတွက် အသေခံသွားတဲ့ ဘာသာရေးသူရဲကောင်း လို့မြင်တဲ့ သူတွေရှိ ပေမဲ့ နက်နက်တွေးရင် အိုစာမာ ကြောင့် ယနေ့ အစ္စလမ် ဘာသာ ဟာ အန္တရာယ် လို့ ကမ္ဘာက မြင်လာကြရပြီ။ ကွန်မြူနစ် တွေ မိုးကောင်းစဉ် ကာလ ၊ တကမ္ဘာလုံးရဲရဲနီ နေတဲ့ ကာလမှာ မက်စ်စစ်တွေက ဆင်းရဲသားတွေအတွက် ကွန်မြူနစ်စနစ်ပါ ဆိုပြီး ကြွေးကျော် နံမည်ကောင်း ယူနေကြပြီးမှ ၊ တူသဇင် အလံထောင်ပြီး Pol Pot တို့ မိမိလူဦးရေ ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံကို ရက်ရက်ဆက်ဆက် သတ်ပြ လိုက်တော့မှ အိုးမိုင်ဂေါ့ (OMG) ဆိုပြီး လူတွေ ကွန်မြူနစ် စနစ်ကို အော့ကြောလန် ကုန်ကြရတာ။အစ္စလမ် ဘာသာဟာ လည်းထောက်လျှောက် ဘာသာရေးပညာရှင်တွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာ ပါ ။ အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ ဘာသာပါဆိုပြီး ကြေငြာမောင်းခပ် နေကြရာမှ ၊ အိုစာမာ တို့က မြင်မြင်သမျှသတ် ၊ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ကွ ၊ ဘာသာပြောင်းမလား ၊ မပြောင်းရင် Infidel တွေကို သတ်ဆိုပြီး ကြမ်းပြတော့မှ မြတ်စွာဘုရား ကယ်ကြပါဦး ဖြစ်ကုန်ရတယ်။ ဒါကြောင့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် အနေနဲ့ ကြည့်တတ်ရင် ရင်နာစရာပဲ။ ဒိထက် တဆင့်ပို ကြည့်တတ်ရင် အခု ကမ္ဘာကြီးမှာ အစ္စလမ်ဘာသာ ဆိုတာနဲ့ မယုံကြတော့ဖူး။ မုတ်ဆိတ်မွှေး ၊ ပုသိုင်းမွှေးနဲ့ အစ္စလမ် ပုံတွေ ၊ ခေါင်းပူးခြုံတွေ ပါလာရင် ၊ ခရီးသည်တွေကိုယ်နှိုက် က သံသယ နဲ့ ၀ိုင်းကြည့်နေကြပြီ ၊ ကျုပ်မမောင်းနိုင်ဖူး ဆိုတဲ့ လေယဉ်မှူးတွေတောင် ပေါ် လာကြပြီ။ ဒါ အိုစာမာ တို့ရဲ့ အစ္စလမ် အကြမ်းဖက်တွေကြောင့်ပဲ။ဒါ အိုစာမာတို့ရဲ့ Extremism က ရလာတဲ့ Negative effect & Negative Image ပဲလေ။တနည်းအားဖြင့် ရုပ်ပုံမှန် ကို ပုံဖေါ်သွားပေးတဲ့ ဥါဏ်ကြီးရှင်ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။Myanmar Express
This Article is very good. This is true.There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic . Bangladesh Government want Myanmar to become Muslim country if they don’t accept illegal 700,000 Bangladesh Rohingya muslims and illegal 700000 Rohingys live in Rakhine state and Myanmar. These rohingya s in Myanmar are real Bangladesh muslims. Bangladesh muslims invaded and insult Myanmar. They are liars .Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step . ( 1) Must do Press conference and clearly tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnic and Myanmar Nationality forever . There is no Rohingya in Myanmar and Bangladesh history. Bangladesh government and muslims named Muslims in Rakhine state to become Myanmar Ethnic. They are liars . There isastatement that Rohingya is not Myanmar ethnic in Myanmar Constitution. There must be have Muslim (Islam) control laws ( ban muslims immigrants, ban Mosque and muslim schools and Islamic centers , 1 muslim for 1 wives and 1 muslim kid ) in Myanmar Constitution . If so, Rohingya and World can't colonize Rakhine state and Myanmar.(2) Current Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Aung San Su Kyi issue leagal statement that Rohingya is not Myanmar Ethnic and Myanmar Nationality. (3) Then deport all 700,000 Rohingya Muslims who don’t have National ID or have ID ( because Rrohingya bribealot of money to immigration officers in Myanmar Bangladesh border ) and Muslims from Rakhine state and Myanmar. Arrest and fine Myanmar immigration officers and hospitals who took bribe from Bangladesh muslims and issue Myanmar birth certificates and National ID to illegal Bangladesh muslims. (4 ) Then Establish good economy in Northern Rakhine state ( Bangladesh -Myanmar border ) and organize millions of Myanmar migrate to Northern Rakhine and Rakhine state. If so Myanmar and Rakhine people will be majority in Northern Rakhine and Rakhine state.World Rohingya , Saudi Arabia Government and Other Muslim country governments and World muslims bribe , lobby and give millions of money to BBC, British Government ( One of Current UK cabinet is Muslim ) and VOA and World media , UN, NGO who support Rohingya. So Myanmar government and opposition leaders protest them. Arrest Pro Rohingya muslim , Myanmar muslims in UN, UNHCR, NGO in Myanmar.All Rakhine and Myanmar people must protest in front of Bangladesh Embassy, British Embassy , Saudi Arabia Embassy, British Consulate , and other pro Rhohingya and pro muslim country Embassies and Consulates in Myanmar about Rohingya..
14 June 2012 04:06
wow,very good article !!!!!!!!!!!!!!!thanks you for your research !
kaung lite tat sar kwar, kaung lay min taw tae
ဘာသာရေး စာရေးလည်း အချက်အလက်မှန်အောင် ရေးကြပါ။ Universal truth သို့ မဟုတ် Conventional truth ဆိုတာ သမုတိသစ္စာ အမည်နာမ အားဖြင့် မှန်တယ်။ ရပ်ထဲ ရွာထဲမှာ သုံးတဲ့ အသုံးအနှုန်း။ ဘုရားဟောတဲ့ ရုပ်တွေ၊ နာမ်တွေ၊ ဓါတ်တွေ ပရမတ်တွေ ဆိုတာ ကမှ Absolute truth ပရမတ်သစ္စာ။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ မဆိုမှန်တဲ့ အမှန်တရား။ ဘုရားပွင့်မှ သိခွင့်ရတဲ့တရား။
14 June 2012 14:11
ဗုဒ္ဓဘာသာ မှာ ဘုရားသာသနာ ၊ ပြီးရင် သိကြားသာသနာ ၊ ပြီးရင် သာသနာပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ပါတယ် မဟုတ်လား.... မှားပါသည်။ သိကြားသာသနာ ဆိုတာမရှိပါ.. ဘယ်သိကြားမင်းကမှ သာသနာ ကိုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိ...
ကုလသမဂ္ဂ ဗုဒ္ဓနေ့၏ ဆောင်ပုဒ် ဆွေးနွေး ချက်များသည် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိသားစုများ သာမက တစ်ကမ္ဘာ လုံးကို အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေမည်
[image: ကုလသမဂ္ဂ ဗုဒ္ဓနေ့၏ ဆောင်ပုဒ် ဆွေးနွေး ချက်များသည် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် မိသားစုများ သာမက တစ်ကမ္ဘာ လုံးကို အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေမည်] ကုလသမဂ္ဂ ဗုဒ္ဓနေ့၏ ဆောင်ပုဒ်...